Labadii wiil oo dambi lagu waayay | Somaliska
Labo dhalinyaro Soomaali ah oo hada ka hor maxkamad ku taala Göteborg ay ku xukuntahay min 4 sano oo xarig ah ka dib markii lagu eedeyay in ay falal argagixiso ka qorsheynayeen Soomaaliya ayaa Maanta maxkamadi ku wayday wax dambi ah. Ragaan oo kala ah Maxamud Jamac iyo Bille Ilyas Maxamed oo dhowr isbuuc ka hor xabsiga laga siidaayay ayaa maanta maxkamadu go'aamisay in aan cadeyn loo hayn in ay qorshaynayeen falalka lagu soo eedeyay. Dacwad oogaha Agnetha Hilding Qvarnström ayaa markii hore ku eedeysay in ragaan ay taageerayaal u yihiin Al-shabaab ayadoo intaas ku dartay in mid ka mid ah oo ku soo tababartay xero ay leedahay Al-shabaab. Cadeymaha ay dacwad oogaha soo bandhigtay ayaa waxaa ka mid ahaa dhageysiga telefoono laga duubay ragaan. Balse maxkamada ayaa sheegtay in aysan dambi ahayn in qofku uu afka ka taageero urur argagixiso oo xitaa uu ku biiro balse marka uu dambi gaysto oo keliya ay sharci daro noqoneyso. Dacwad oogaha ayaa ku dooday in mid ka mid ah raga uu go'aansaday in uu isku qarxiyo Soomaalida balse xitaa waxaa la sheegay in aysan dambi ahayn in uu qofku wax go'aansado uusan sameyn. Dacwad oogaha ayaa sheegtay in aysan hubin in ay racfaan ka qaadaneyso xukunka maxkamada ayadoo sheegtay in ay aad u adagtahay in maxkamada sare ay dib u eegto arintaan.
Labo dhalinyaro Soomaali ah oo hada ka hor maxkamad ku taala Göteborg ay ku xukuntahay min 4 sano oo xarig ah ka dib markii lagu eedeyay in ay falal argagixiso ka qorsheynayeen Soomaaliya ayaa Maanta maxkamadi ku wayday wax dambi ah.
Ragaan oo kala ah Maxamud Jamac iyo Bille Ilyas Maxamed oo dhowr isbuuc ka hor xabsiga laga siidaayay ayaa maanta maxkamadu go’aamisay in aan cadeyn loo hayn in ay qorshaynayeen falalka lagu soo eedeyay.
Dacwad oogaha Agnetha Hilding Qvarnström ayaa markii hore ku eedeysay in ragaan ay taageerayaal u yihiin Al-shabaab ayadoo intaas ku dartay in mid ka mid ah oo ku soo tababartay xero ay leedahay Al-shabaab.
Cadeymaha ay dacwad oogaha soo bandhigtay ayaa waxaa ka mid ahaa dhageysiga telefoono laga duubay ragaan. Balse maxkamada ayaa sheegtay in aysan dambi ahayn in qofku uu afka ka taageero urur argagixiso oo xitaa uu ku biiro balse marka uu dambi gaysto oo keliya ay sharci daro noqoneyso.
Dacwad oogaha ayaa ku dooday in mid ka mid ah raga uu go’aansaday in uu isku qarxiyo Soomaalida balse xitaa waxaa la sheegay in aysan dambi ahayn in uu qofku wax go’aansado uusan sameyn.
Dacwad oogaha ayaa sheegtay in aysan hubin in ay racfaan ka qaadaneyso xukunka maxkamada ayadoo sheegtay in ay aad u adagtahay in maxkamada sare ay dib u eegto arintaan.
Horta ilaah ku mahadiya midakale dadka waxan uga digayaa in wax an wax utareynin kahadlan markan telfon aya wax kasta lagashega walal qofka somaliga ahow dantada garo kox ama urur wax kumatarayan kafakar sidaa “ilaah ugu xirnan laheyd bis” s/c